रुकुम घटना- १२ दिनपछि सबै डर लाग्दा तथ्यहरु बाहिरियो ! नवराज र केटीको पहिलो भेटदेखि अन्तिम म्यासेजसम्म (भिडियो हेर्नुस) – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /Video/रुकुम घटना- १२ दिनपछि सबै डर लाग्दा तथ्यहरु बाहिरियो ! नवराज र केटीको पहिलो भेटदेखि अन्तिम म्यासेजसम्म (भिडियो हेर्नुस)
रुकुम घटना- १२ दिनपछि सबै डर लाग्दा तथ्यहरु बाहिरियो ! नवराज र केटीको पहिलो भेटदेखि अन्तिम म्यासेजसम्म (भिडियो हेर्नुस)
२२ जेठ, विराटनगर । घरमा खाद्यान्न सकिएर भोकले बे’होस् भएकी मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाकी एक जना सुत्केरी लाई नेपाली कांग्रेस १ नम्बर प्रदेश का प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सहयोग गरेका छन् । चामल लगायत घरमा भएका सबै खाद्यान्न सकिएर पोषिलो खाना खान नपाउँदा सुत्केरी रेखा परियार ऋषिदेव बे’होस् भएको भिडियो सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा भाइ’रल बनेको थियो । आफ्नै गाउँपालिकाकी एक जना सुत्केरीले खान समेत नपाएको र बे’होस् भएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा आएपछि सहयोग गर्न पी’डितकै घर पुगेको प्रमुख सचेतक कार्कीले बताए ।
सुत्केरी ऋषिदेवका अनुसार कार्कीले आफैं दाल, चामल,मासु र स–साना नानीहरूको लागि कपडा लिएर पी’डितको घरसम्म पुगेका हुन् । ऋषिदेवले भनिन्, “सांसद कार्की आफैं खाने कुरा, मासु र साडी बोकेर आउनु भएछ । मेरो बच्चाहरूलाई लुगा किनिदिनु भनेर पैसा पनि दिएर जानुभयो । मलाई साडी ल्याई दिनुभएको छ ।”
बुढिगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर ४ माथिल्लो गोकुवामा रेखा र उनको परिवार सानो झुप्रोमा बस्छ । मजदुरी गरेर आएको पैसाले परिवार चल्छ । तर, लामो समयको ल’कडाउनका कारण घरमै बसाइ भएको र खाद्यान्न नै सकिएर समस्या भएको ऋषिदेवले सुनाइन् । प्रमुख सचेतक कार्कीले भने, “भोकले बे’होस् भएको भिडियो देखेर साह्रै दुःख लाग्यो त्यही भएर आफैं सहयोग सामग्री बोकेर पुगेको हुँ ।” कोरो’ना म’हामारीका कारण स्थानीय रुपमै रोजगारी गुमाएका वि’पन्नहरूका लागि सरकारले राहत तथा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन नसक्दा गाउँघरमा यस्ता समस्या बढ्न थालेको कार्कीको भनाइ छ ।
उडेको केहीबेरमै प्राविधिक समस्या देखिएपछि विमानलाई फर्काएर आकस्मिक अवतरण गराइएको थियो । अवतरण गर्दागर्दै विमानको इन्जिनमा आगो लागेको थियो । सामाजिक सन्जालमा पोष्ट गरिएको भिडियोमा जहाज अवतरण गरिरहेको बेला पछाडिको भागमा आगो दन्किरहेको र कालो धुवाँको मुस्लो उडिरहेको देखिन्छ ।
गरिएको थियो ।रुसको सरकारी विमान कम्पनी एयरोफ्लोटले प्राविधिक गडबडीका कारण विमानलाई फोर्स ल्याण्डिङ गराइएको जनाएको छ । तर, प्राविधिक गडबडीको बारेमा भने विस्तृतमा बताइएको छैन । दु*र्घटनाको कारणबारे जाँच सुरु गरिएको बीबीसीले जनाएको छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले दुर्घटनामा मृत्यु भएकाका परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।
रुसको सरकारी कम्पनी एयरोफ्लोटले आफ्नो वेबसाइटमा दुर्घटनामा जीवित व्यक्तिहरुको नामावली प्रकाशित गरेको छ । सूचीमा ३३ जनाको नाम छ । कम्पनीले आपतकालीन टेलिफोन नम्बर पनि जारी गरेको छ । कम्पनीले घाइतेहरुका परिवारलाई निःशुल्क मस्को पुर्‍याइने जानकारी पनि दिएको छ । मिडिया रिपोर्टसहरुका अनुसार विमानको पहिलो आपतकालीन ल्याण्डिङ सफल हुन सकेन ।ट्राकिङ वेबसाइड फ्लाइट राडार २४ मा उडेको करिब आधा घण्टामै विमानले आकस्मिक अवतरण गर्न कोशिस गरेको देखिन्छ ।Source:HKkhabar.coom
पर्सी कुशे औसीं, बुवाको मुख हेर्ने दिन यसो गर्दा हुनेछ भाग्य बृद्धि